Renaissance Curaçao na-eme ka ezumike dị mma na anya ọhụrụ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Resorts » Renaissance Curaçao na-eme ka ezumike dị mma na anya ọhụrụ
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Curacao • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • investments • Akụkọ okomoko • News • Resorts • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Nke a na February na-echeta akara afọ 10 nke Renaissance Curaçao Resort & Casino meghere ọnụ ụzọ ya. Iji mee ka ihe ịga nke ọma ha na-aga n'ihu dị ka ihe dị mkpa nye obodo ndị njem njem Curaçao, ụlọ nkwari akụ ahụ ga-enweta ume ọhụrụ buru ibu iji nye ndị ọzọ izu ike na izu ike.
Onye isi njikwa, Maylin Trenidad kwuru, "Anyị chọrọ igosipụta ịma mma okike nke Curaçao na ọnọdụ dị jụụ ma zuru ike," "Anyị ọbịa ga-achọpụta a sleek, ọzọ oge a haziri na-na-anọgide na-na anyị Curaçao mgbọrọgwụ na-egosipụta Renaissance ika."
Ntughari a ga-amalite na Eprel 1 wee wuchaa n'ọtụtụ ụzọ. A ga-emezigharị ụlọ oriri na ọ ,ụ ,ụ, ebe a na-anabata ndị ọbịa, na cha cha na August. Maka agba abụọ, a na-edozigharị ụlọ ndị ọbịa maka imecha ọnwa Disemba.
Ndị ọbịa nwere ike ịtụ anya na atụmatụ ga-eme n'ọdịnihu iji jikọta ihe nke ime ụlọ na n'èzí, ebe ha na-ewukwasị agwaetiti mara mma nke Renaissance Curaçao. Isi ihe ndị gụnyere:
• Pụrụ Iche “Luxe Cocoon” - Ebe ọhụụ ọhụrụ ahụ ga-enye mmekọrịta miri emi ma miri emi nke ọbịa maka ịnụ ụtọ mbata na oge niile ha nọrọ. E gosipụtara site na mbadamba ahụ, site na arịa ụlọ na ihe osise a na-agbasasị na mpaghara ahụ, textures na-adọrọ mmasị na ihe ịtụnanya zoro ezo ga-atọ ụtọ n'akụkụ ọ bụla.
• vitzọ cha cha chagharịrị - casinolọ cha cha kacha eleta na Curaçao ga-anabata ndị ọbịa n'ime ama egwuregwu 1,500 square-ụkwụ okenye nwere ọnụ ụzọ dị larịị na nke ọgbara ọhụụ.
• Gulọ ndị ọbịa nwere nkwalite - roomslọ ndị ọbịa a kwalitere na ngwakọta nke obodo ndị mepere emepe na ihe ndị sitere n'okike ga-agụnye mgbakwunye ọhụrụ dị ka nka seramiiki nke obodo na agba dị iche iche mara mma. Paịl mara mma nke arụpụtara ma nụchaa ga -emepụta ohere maka ebe mgbaba nzuzo ma ọ bụ ebe ọrụ izu ike.
• Restaurant Restaurant Nautilus - A ga-agbanwe usoro imepụta ụlọ oriri na ọ alụ overallụ iji gosipụta echiche chi dị mma.
A ga-etinye mmezigharị na nkebi ka ikwe ka nhazigharị ahụ rụchaa nke ọma ma dịkwa n’oge, ma na-ekwekwa ka ndị ọbịa ghara igbochi dị ka o kwere mee.